Dhismaha Ganacsiga Iibka iyo Ijaarka gudaha Melbourne
Australia, oo rasmi ah Dawlada Dhexe ee Australia, waa wadan madaxbanaan oo ka kooban dhul weynaha qaarada Australia, jasiiradda Tasmania, iyo jasiirado tiro badan oo yaryar. Waa dalka ugu weyn Oceania iyo dalka lixaad ee adduunka ugu weyn marka loo eego isugeyn ahaan. Dadweynaha 26 milyan ayaa si aad ah loo abaabulay oo si aad ah ugu urursan badda bariga. Caasimadda Australia waa Canberra, magaalada ugu weynina waa Sydney. Meelaha kale ee waaweyn ee magaalooyinka waa Melbourne, Brisbane, Perth, iyo Adelaide. Australiyaanka asaliga ah waxay daganaayeen qaarada qiyaastii 65,000 sano kahor imaatinka koowaad ee sahaminta Dutch-ka horaantii qarnigii 17aad, kuwasoo ugu magac daray New Holland. Sannadkii 1770, badhkii bariga Australiya waxaa sheegtey Great Britain oo markii hore la dejiyay gaadiid ciqaab ah oo loo qaado gumeysiga New South Wales laga bilaabo 26 Janaayo 1788, oo ah maalin noqotay maalinta qaran ee Australia. Dadweynaha ayaa si is daba joog ah ugu koray sannadihii dambe, iyo markii ay ahayd 1850s birta dahabka ah, qaarada inteeda badan ayaa la sahamiyay waxaana la aasaasay shan gumeysi oo is xukun oo dheeri ah. 1dii Janaayo 1901, lixda gobal waxay degeen, iyaga oo aasaastay Dawlada Dhexe ee Australia. Australiya waxay wixii intaa ka dambeeyay sii wadday nidaam siyaasadeed oo dimoqraadi ah oo xasiloon oo u shaqeeya boqortooyo dastuuri ah oo federaal ah, oo ka kooban lix gobol iyo toban dhulal. Australia waa tan ugu da'da weyn, ugu kulula, uguna caansan qaarada, oo leh carrada ugu yar ee bacrin ah. Waxay leedahay dhul-gariir dhan 7,617,930 kiiloomitir laba jibaaran (2,941,300 sq mi). Dal gobaleed, baaxaddiisu waxay siisaa dhul balaadhan oo balaadhan, oo ay ku yaal saxaraha badhtamaha, kaymaha kaymaha waqooyi-bari, iyo buuro ku yaal koonfurta-bari. Tirada dadka, 2.8 degane halkii kiiloomitir oo laba jibbaaran, ayaa weli ku jira kuwa ugu hooseeya adduunka. Australiya waxay ka soo saartaa dakhligooda ilo kala duwan oo ay ku jiraan dhoofinta macdanta, isgaarsiinta, banki, soo saarista, iyo waxbarashada caalamiga ah. Waxay leedahay dhaqaale dakhli sarreeya, oo leh dakhliga tobnaad ee ugu sarreeya dakhliga ugu sarreeya ee dunida. Waa awood goboleed waxayna leedahay qarashka militari ee 13-aad ee dunida ugu sareeya. Australia waxay leedahay soogalootiga ugu weyn adduunka ee sideedaad ee ugu weyn dunida, iyadoo soogalootigu ay ku jiraan 29% tirada dadka. Lahaanshaha saddexaad ee ugu sarreeya horumarka aadanaha iyo dimuqraaddiyadda sideedaad ee ugu sarreysa adduunka, waddanku wuxuu ku jiraa heerar sare oo xagga tayada nolosha ah, caafimaadka, waxbarashadda, xorriyadda dhaqaalaha, xorriyadda madaniga ah, iyo xuquuqaha siyaasadeed, iyada oo dhammaan magaalooyinkeedii waaweyni ay si aad ah ugu wanaagsan yihiin isbarbardhigga adduunka. sahamada livability. Australiya waxay xubin ka tahay Qaramada Midoobay, G20, Commonwealth of Nations, ANZUS, Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Horumarinta (OECD), Ururka Ganacsiga Aduunka, Iskaashiga Dhaqaalaha Asia-Pacific, Madasha Pacific Islands, iyo ASEAN Plus Six farsamada.